Yintoni enokuyilindela kumntwana oneminyaka enesithoba? Imigaqo yokunyamekela kuye kunye neengcomo zokutya.
Umntwana kwiinyanga ezili-9: uphuhliso, ukondla, imihla ngemihla
Ukuphuhliswa kwabantwana kwiinyanga ezilisithoba.
Umntwana kwiinyanga ezithoba uhlala ebangela uvuyo kunye nokubonakala okucacileyo kubazali. Kwaye akukhona ukuba uhlala efuna ukudlala nokuhlola ihlabathi elikujikelezayo, kodwa nakwiimvavanyo zakhe zokuqala. Nangona wakho omncinane uza kuzama ukuzithoba iinyawo zakhe ngokwakhe, akakwazi ukuphumelela. Musa ukunyanzelisa umntwana ukuba ahambe, uya kuyenza ngokwabo emva kweenyanga ezimbalwa.
Kodwa uphuhliso luqhubeka. Umntwana uya kufuneka ukuba achukumise ubunxibe entanyeni yomama okanye afumane iselula ephakamileyo yengubo kayise. Ekubeni abantwana beli phakade ba khumbula ngokugqibeleleyo nantoni na ukuphi ubuxoki, akunakwenzeka ukuba uyenze ukuba into enomdla ayikho kwindawo eqhelekileyo. I-Karapuzy iqala ngakumbi ukubonisa umlingiswa, kwaye ukuba uyimholela apho engayifuni, inkunzi iya kubhikisha.
Yintoni kufuneka umntwana akwazi ukwenza kule minyaka?
Abantwana abaneminyaka engama-9 ubudala banokubambezela ixesha elide, bethetha, bathetha ngolwimi lwabo. Ngamanye amaxesha aphinde afake iilayibhile zabo zokuqala ngomculo othile. Ukuba ubuza umntwana apho umlomo wakhe, impumlo okanye indlebe, uya kubonisa ngokuvuya. Kuyafana nangomama okanye utata.
Ukuba awuzange uhlanganise zonke iziseko kunye nezikhuselo zokukhusela ngaphambili, qiniseka ukwenza oku ngoku, njengokuba umntwana uya kubambelela iminwe yakhe kuzo zonke izimbobo ezifikeleleke.
Abantwana abaneminyaka engama-9 ubudala banamathele ukukhupha iphepha, iingubo, amakhadibhodi okanye i-napkins. Izinto ezizenzekelayo kunye nezixhobo ezinzima, ezifana nodongwe.
Ngokwenyama, iintsana nazo zikhula kakuhle. Okokuqala, bahlala benethemba elihle kwaye behleli. Kodwa abaninzi abantu bazama ukwenza amanyathelo okuqala, abambe izandla zabo eludongeni okanye kwifenitshala. Ukongezelela, abantwana banqabile kwaye bajikelele ukuze bafikelele kwi-toy yabo eyintandokazi okanye into enomdla.
Imithetho yokunyamekela, ukondla kunye nophuhliso
Nangona ukuba zonke iinkqubo zokunyamekela azitshintshi, uya kumangaliswa ukuba umntwana uya kuyenza njani le nto okanye loo nkqubo. Ngeminyaka e-9 ubudala umntwana ubonisa ngokucacileyo ukuba uthanda ukugebha kwindawo yokuhlambela okanye akahlali wonwabile ngokucoceka kweendlebe. Nangona kunjalo, abantwana banomdla wokuxelisa abantu abadala kwizenzo zabo, ngoko uzame ukuziphatha kwakho ukuze umthabathele ukuba enze iinkqubo zokucoceka eziyimfuneko.
Nangona abantwana abaninzi beli xesha abanakukwazi ukulawula ngaphandle kobisi lwebele okanye imimandla yokufakelwa, ukutya kwabo kugqityiwe ngokuphindaphindiweyo. Kuye kwongezwa isityalo esiqhelekileyo kunye nemifuno yefestile kunye neer porridges. Into eyona nto kukubona ukuba umntwana akanalo utshwala kwizinto ezintsha zokutya.
Akunakwenzeka ukulawula urhulumente wengane yomntwana ngendlela enokulala ngalolo suku kuphela kwiiyure ezithile. Nangona kunjalo, ngobusuku iintsana ezithoba zisoloko zivuka kwaye ziphazamise umama. Ngoko ke, ixesha lemihla yomsebenzi lizinikele ngokupheleleyo kwiimidlalo nophuhliso.
Nangona ukuba ukuphuhliswa kwengane kuqhubela phambili kumgca, kufuneka ukuba uchaze ukuba zeziphi izinto ezinokuqhekeka kwaye zaphulwe, kwaye ezingenako.
Njengoko usana luba luzimeleyo, kunokwenzeka ukuba umqeqeshe ukuba asuse kwaye agqoke iimpahla. Ungalindelanga ukuba aqale ukugqoka ukuhamba. Yiphatha le nkqubo njengolonwabo, uvumele umntwana ukuba agqoke isigqoko okanye i-panties ngokwakhe.
Khumbula ukuba abantwana babamba yonke into oyithethayo. Ngoko ke, qi niseka ukuba ubadumise ngokuphumelela kancinci: umkhankaso ophumeleleyo kwi-pot, efanelekileyo yokugqoka i-headdress okanye idle inyosi.
Iinyembezi zokuqala zentsana esanda kuzalwa
Xa umntwana eqala ukukhula iinwele
Eyona nto imfutshane neyifutshane iyavuyiswa ngo-Matshi 8 kumaqabane kunye nabamantombazana-kwiimisms, iprose, izinkondlo, imifanekiso -Iimzekelo zemizuzu emfutshane kunye nehlekisayo xa uvakalisa ngoMatshi 8 ngamazwi akho
U-Ksenia Sobchak onomdla ubonisa umthambo okhulelwe
Ngomhla weTatyana ka-2017 ugujwa eRashiya
Inkulumo yentetho ngokubhekelana ngesondo lomntwana
Ukuba indoda yaphakamisa isandla sayo kumfazi
Iphunga elimnandi nelomuncu
Ngaba kufanelekile ukuqala ulwalamano olutsha nomyeni ongaphambili?
Indlela yokwakha ubudlelwane nootata onokukhawuleza
Uhlobo lwangaphakathi lwehlobo-2016 ukusuka kwikhaya laseMononi
I-Fiber ngumthombo wempilo
Imbali ye-brand yeVersace
Izibhakabhaka zasebusika ezisuka kulwandle-buckthorn
Lithini isikhumba sethu?
Ungakhetha njani umthandi olungileyo?
U-Ksenia Sobchak uxolisa uMaxim Vitorgan wokunyanzela
Iinyanga ezintandathu: yintoni umntwana onokuyenza?